सहमतिमै यौ’नसम्पर्क, गाउँलेले देखेपछि ‘ब-ला-त्का-र’ ! – Life Nepali
सहमतिमै यौ’नसम्पर्क, गाउँलेले देखेपछि ‘ब-ला-त्का-र’ !
जनकपुरधाम । धनुषामा कि’शोरी ब’लात्कारको आ’रोपमा एक जना युवक प’क्राउ परेका छन् । कि’शोरीलाई उनकै घरबाट उ’ठाएर ल’गी ब’ला’त्का’र गरेको आ’रोपमा प’क्राउ परेका हुन् । धनुषाको क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका वडा नं. ३ की १८ बर्षिय यु’वतीले आफू पि’साब फे’र्न बाहिर निस्कदा युवक (अ’पराध पुष्टि नभएकोले नाम गो’प्य राखिएको) ले आफूलाई उ’ठाएर लगी ब’ला’त्का’र गरेको आ’रोप लगाइएको छ ।
रा’ती पि’साब फेर्न नि’स्केकी युवति धेरै बेरसम्म घर नआएपछि उनको खोज तलास गरिएको थियो । यद्यपी, युवतिले एक जना युवकको मात्रै नाम भनेपनि युवकले उनलाई उठाउँदा उनले प्र’तिकार, ह’ल्ला वा चि’च्या’इनन् । यता, ईलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रहरी ईन्स्पेक्टर पप्पु नायकले युवक र कि’शोरी सहमतिमै गएको र यौ’नस’म्पर्क पनि सहमतिमै गरेको बताएका छन् । यद्यपी उनले २० बर्ष मुनी भएकोले सहमतिमै गरेपनि ब’ला’त्का’र नै मानिने बताएका छन् ।
“एक्लै युवकले १८ बर्षकी कि’शोरीलाई उनको घरबाट उ’ठाउँदा कि’शोरीले ह’ल्ला किन गरेनन त्यतिबेला ? ज’बर’ज’स्ती गरेको भएको कि’शोरी हो–हल्ला गर्नुपर्ने, चि’च्या’उनुपर्ने, गु’हार मा’ग्नुपर्ने थियो, तर त्यस्तो केही गरिएको देखिएको छैन ।”– उनले भने । घरबाट पि’साब फेर्न कि’शोरी बाहिर निस्केकी र धेरै बेरपछि पनि घर न’आएपछि उनको ख’जतलास सुरु गरिएको थियो । केही घ’ण्टापछि युवकसँगै घर आएकी युवतिको परिवार, आफन्तजन र स्थानीयहरुले युवकलाई नि’यन्त्रणमा लिइ नि’र्घात कु’टपि’ट गरेको हो ।
कु’टपि’टपछि ईलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरलाई बोलाएर प्रहरीको जिम्मा लगाएपछि कि’शोरी र युवकको स्वास्थ्य परीक्षणको लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर ल्याइएको जनाइएको छ । कु’टपि’टले यु’वक घाईते भएका छन् । उनको उपचार पनि प्रादेशिक अस्पतालमै भइरहेको जनाइएको छ । प्रहरीका अनुसार, सहमतिमै यौ’नस’म्पर्क राखेपछि गाउँलेहरुले देखेपछि ज’बरद’स्ती भनिएको हो । यद्यपी उमेर हदका कारण ब’ला’त्कार नै मानिने जनाइएको छ । *** यो समाचारको पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल 👇️क्लिक गर्नुहोला ***
Previous दु:खद खबर – बा’ढिमा परेकालाइ उ’द्वार गर्न गएका इश्वर , आफै बा’ढिबाट ब’च्न स’केनन ।
Next लकाडाउन खुले सङ्गै आज मात्रै देखिए यति धेरै कोरोना संक्रमित ( विवरण सहित )